परीक्षा छाडेर गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सिंहदरबार गेटमा, दुई छानबिन समिति कलेजमा – Health Post Nepal
परीक्षा छाडेर गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सिंहदरबार गेटमा, दुई छानबिन समिति कलेजमा
२०७५ फागुन १३ गते १७:४८
कलेजले असुल गरेको अवैध शुल्क फिर्तालगायत माग रखी आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । कलेजले आफ्ना जायज मागको नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनीहरू आइतबारदेखि सुरु भएको परीक्षामा सहभागी नभई कलेजविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं आएका हुन् ।
कलेजको विवादबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खटाइएका दुई छानबिन समितिको रोहबरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्ता गराउँदासमेत कलेज विद्यार्थीको मागप्रति लचक नदेखिएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी गृह मन्त्रालयसमक्ष कलेजमाथि कारबाहीको माग गर्न आइतबार काठमाडौं आए । तर, गृहमन्त्रीलाई भेट्ने उनीहरूको सोमबार दिनभरको प्रयास सफल हुन सकेन । ‘केहीबेर भन्दै हामीलाई दिनभर कुराइयो, हामी मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा निरन्तर फोन गरिरह्यौँ, तर अन्तिममा आएर सिडियो कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएकाले उतै जान भनियो,’ एक विद्यार्थीले भने । कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सन् २०१५ ब्याचका ८३ र ०१४ ब्याचको पूरक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने ३ गरी ८६ विद्यार्थीले परीक्षा नदिएका हुन् । उनीहरूले परीक्षाको फारमसमेत भरेका थिएनन् । परीक्षा बोर्डले तोकेको समयभित्र फारम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी अतिरिक्त शुल्क लिएर फारम भर्ने समय थपिदिएको थियो । कलेज प्रशासनका कर्मचारीले अन्तिम अवस्थामा विद्यार्थीको कोठामै फारम पुर्याइदिएका थिए । तर, उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म फारम नभर्ने अडान छोडेनन् ।
‘कलेजकै लापरबाहीले हामी आन्दोलनमा छौँ । कलेजले हाम्रा मागको सुनुवाइ गरेन, हामीले परीक्षाको फारम भरेनौँ,’ उनले भने, ‘फारम नभरेपछि परीक्षा दिने कुरै भएन । अझै पनि हाम्रा मागलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भने त्यसको परिणाम कलेजले भोग्नुपर्छ ।’
गण्डकी मेडिकल कलेज हामीले आफ्नो मात्र माग तेस्र्याएका छैनौँ, अब आउने विद्यार्थीलाई भ्रष्टाचारको चंगुलबाट जोगाउने अभियान चलाइरहेका छौँ ।’ अवैध रूपमा लिइएको शुल्कबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि त्यसबारे कुनै कारबाही सुरु नभएको उनको गुनासो छ ।
अर्का विद्यार्थी प्रवीण गौतम माग पूरा भए तत्कालै आन्दोलन रोकेर पढाइ सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘कलेजकै लापरबाहीले हामी आन्दोलनमा छौँ । कलेजले हाम्रा मागको सुनुवाइ गरेन, हामीले परीक्षाको फारम भरेनौँ,’ उनले भने, ‘फारम नभरेपछि परीक्षा दिने कुरै भएन । अझै पनि हाम्रा मागलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भने त्यसको परिणाम कलेजले भोग्नुपर्छ ।’ परीक्षालाई देखाएर विद्यार्थीसँग कलेजले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको उनको आरोप छ । १७ फागुनदेखि विद्यार्थीले चारबुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेपछि कलेजको पठन–पाठन ठप्प छ भने अस्पतालको ओपिडीकक्षमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ । अस्पतालले भने इमर्जेन्सीमा समेत विद्यार्थीले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।
कलेजले गैरकानुनी रूपमा उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको नीति–नियम र निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई आधार बनाएर परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल हेर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग विद्यार्थीको छ ।
‘हामी नियमविपरीत छैनौँ । तोकिएकै शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई पढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कलेजलाई धरासायी बनाउन केही तत्व सक्रिय छन् । त्यसकै प्रभाव अहिले देखिएको हो ।’ छानबिनमा गल्ती गरेको भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले सुनाए ।
विद्यार्थीको आन्दोलन, कलेजमा पठन–पाठन अवरोधको अवस्था र त्यसको कारणबारे बुझ्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले खटाएको तीन सदस्यीय टोली स्थलगत जाँचबुझका लागि शुक्रबार कलेज पुगेको छ । काउन्सिलले कलेजमा आन्दोलनको अवस्था र कारणबारे स्थलगत रूपमै बुझी सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिँदै काउन्सिलका कार्यकारी सदस्यहरू डा. विश्व दवाडी, डा. सुनील शाह र डा. कालुसिंह खत्री सम्मिलित तीन सदस्यीय टोलीलाई बिहीबार कलेजमा खटाएको थियो । टोलीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अनुगमन निर्देशनालयले डा. ओमप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी कलेज पठाएको छ । समितिमा बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोला सदस्य छन् । उक्त समितिले शुक्रबार नै दुवै पक्षसँग कुरा गरेको छ ।
छानबिनका लागि आएका काउन्सिल र त्रिविअन्तर्गतका दुवै समितिलाई साक्षी राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्तासमेत गराएको छ । तर, विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कलेज लचिलो देखिएको छैन । कानुनअनुसार नै शुल्क लिएकाले फिर्ता नहुने कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल बताउँछन् । ‘हामी नियमविपरीत छैनौँ । तोकिएकै शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई पढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कलेजलाई धरासायी बनाउन केही तत्व सक्रिय छन् । त्यसकै प्रभाव अहिले देखिएको हो ।’ छानबिनमा गल्ती गरेको भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले सुनाए ।
विद्यार्थीको आन्दोलनमा अभिभावक, विभिन्न विद्यार्थी संगठन र नागरिक अगुवाको समेत साथ छ । विद्यार्थीले कलेजमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत गरेका छन् ।